Association des Amis de Vatovavy : Nanolotra kaontera ho an’ny Jirama -
AccueilSongandinaAssociation des Amis de Vatovavy : Nanolotra kaontera ho an’ny Jirama
Association des Amis de Vatovavy. Fikambanana iray mijoro any Mananjary amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany. Mahatsapa izy ireo amin’ny fahasahiranan’ny vahoaka eo amin’ny fahazoana herinaratra.
Noho izany indrindra, nanapa-kevitra ny hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanampiana ny orinasa Jirama ity fikambanana iray ity. Araka izany, notanterahina omaly, teny Ambohimanambola, ny lanonam-panolorana ôfisialy ireo kaonteran-jiro miisa 30 000, ary amin’ny Association des Amis Vatovavy. Raha ny fanazavana, mitentina hatrany amin’ny 600 000 Euros, na 2 Miliara Ar ity fanampiana ity, ary fitaovam-pandrefesana nafarana avy any ivelany avokoa ireo natolotra ireo.
Nambaran’ny minisitry ny Angovo (MEH), Lantoniaina Rasoloelison, fa zava-dehibe ny fanampiana toa ny ataon’ity fikambanana iray ity. Izany, hoy izy, dia mba ahafahan’ny orinasa Jirama manitatra ny mpanjifa ao aminy, ary koa mba ahafahan’ny maro mpiray tanindrazana misitraka herinaratra. “Tanjona hapetraka eo amin’ny sehatry ny angovo, dia ny hampitombo isa ny mpiray tanindrazana misitraka herinaratra, indrindra amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina. Efa ao anatin’ny fanatanterahana ny fananganana ireo toho-drano vaventy isika amin’izao fotoana izao. Tsy tetikasa vao haingana, na noforomporonina izany, fa tetikasa efa maty paika mba hanatrarana ny vina napetraky ny Firenena Mikambana, amin’ny alalan’ny fampandrosoana maharitra, ka amin’ny taona 2030 no handrefesana izany. Eo ihany koa ny vina ho an’ny Malagasy, izay mifandraika amin’izay ihany”, hoy ny minisitry ny MEH.
Notsindriany hatrany fa tokony samy hiezaka ny tsirairay amin’ny fanatrarana ireo tanjona hapetraka mba ahafahana manao dingana goavana, mba tsy ho very momoka ny ezaka efa natao sy mbola hotanterahina.
Tanjon’ny fikambanana kosa indray ny mba hahazoan’i Mananjary sy iny faritra misy azy ireo iny jiro, izay nangatahin’izy ireo tamin’ireo tompon’andraikitra mba ho atao laharam-pahamehana.